Tsara ho Fantatry ny Ankizy hoe Mahery Noho ny Demonia i Jesosy
HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bashkir Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Féroïen Ga Grika Groenlandey Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kambôdzianina Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Koreanina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Kwanyama Letonianina Lhukonzo Litoanianina Luganda Malagasy Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Maya Myama Norvezianina Nzema Népali Okpé Oromo Ossète Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanianina Rosianina Samoanina Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Setswana Shona Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tajiki Tandroy Tatar Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Perovianina Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Silianina Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tongan Tseky Tsonga Turkmène Tuvalu Tzotzil Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa
Mahery Noho ny Demonia i Jesosy
NAHOANA no lasa Satana Devoly ny iray tamin’ireo anjelin’Andriamanitra, raha tadidinao?... Tia tena izy ka naniry hivavahana. Izany no nahatonga azy hanohitra an’Andriamanitra. Nisy anjely hafa nanao tahaka an’i Satana koa ve?... Eny. ‘Anjelin’i Satana’, na demonia no iantsoan’ny Baiboly azy ireo.—Apokalypsy 12:9.
Mino ny fisian’Andriamanitra ve ireny anjely ratsy, na demonia ireny?... ‘Mino ny demonia fa misy Andriamanitra’, hoy ny Baiboly. (Jakoba 2:19) Matahotra anefa izy ireo amin’izao fotoana izao. Fantany mantsy fa hosazin’Andriamanitra izy, satria nanao zavatra ratsy. Fa inona no nataon’izy ireo?...
Lazain’ny Baiboly fa niala tany an-danitra fonenany ireo anjely ireo, ary tonga teto an-tany mba hipetraka teto, toy ny olombelona. Nanao izany izy ireo satria te hanao firaisana tamin’ireo vehivavy tsara tarehy teto an-tany. (Genesisy 6:1, 2; Joda 6) Inona no zavatra fantatrao momba ny firaisana?...
Fomba manokana mampikambana ny lehilahy sy vehivavy ny firaisana. Mety hisy zazakely hitombo ao an-kibon’ilay vehivavy aorian’izany. Tsy tokony hanao firaisana anefa ny anjely. Ny mpivady ihany no tian’Andriamanitra hanao firaisana, izany hoe lehilahy iray sy vehivavy iray. Amin’izay dia hikarakara an’izay zaza mety ho teraka eo ilay mpivady.
Inona no zavatra ratsy nataon’ireto anjely ireto?
Niova ho olombelona ireo anjely ireo ary nanao firaisana tamin’ny vehivavy. Nanan-janaka izy avy eo, ka lasa olona ngezabe ny zanany, rehefa lehibe. Tena ratsy fanahy ireny zanany ireny ka nampijaly olona. Nasian’Andriamanitra safo-drano lehibe àry, ka maty tao ireo olona ngezabe sy ny ratsy fanahy rehetra. Nasainy nanamboatra sambo fiara, na sambo lehibe kosa i Noa mba hamonjena an’ireo olona vitsy nanao ny tsara. Nolazain’ilay Mpampianatra Lehibe fa tena ilaina ny mitadidy izay nitranga tamin’ny Safo-drano.—Genesisy 6:3, 4, 13, 14; Lioka 17:26, 27.
Inona no nataon’ireo anjely ratsy ireo rehefa tonga ilay Safo-drano, raha fantatrao?... Lasa niverina ho anjely tany an-danitra indray izy ireo. Tsy afaka ny ho anjelin’Andriamanitra intsony anefa izy ireo, fa lasa anjelin’i Satana, na demonia. Ary inona no nanjo an’ireo zanany ngezabe?... Maty tamin’ny Safo-drano izy ireo, ary maty koa ny olona rehetra tsy nankatò an’Andriamanitra.
Nahoana no betsaka ny fahasahiranana ankehitriny?
Tsy navelan’Andriamanitra hiova ho olombelona intsony ireo demonia nanomboka tamin’ny Safo-drano. Tsy hitan’ny masontsika ireo demonia ireo, nefa mbola mitarika ny olona hanao zavatra ratsy be foana. Izy ireo no mahatonga ny fahasahiranana ho betsaka ankehitriny. Natsipy avy tany an-danitra mantsy izy ireo, ka tonga eto an-tany.
Nahoana no tsy hitantsika ny demonia?... Satria tsy hita maso izy ireo. Fantatsika anefa fa tena velona izy ireo. Lazain’ny Baiboly fa ‘mamitaka ny olona rehetra eto an-tany’ i Satana, ary manampy azy ny demoniany.—Apokalypsy 12:9, 12.
Mety ho voafitaky ny Devoly sy ireo demonia koa ve isika?... Ie, raha tsy mitandrina. Tsy tokony hatahotra anefa isika. Hoy ilay Mpampianatra Lehibe: ‘Tsy manana na inona na inona ato amiko ny Devoly.’ Hiaro antsika amin’ny Devoly sy ny demonia Andriamanitra, raha mifandray tsara Aminy foana isika.—Jaona 14:30.
Tena ilaintsika ny mahafantatra ireo zavatra ratsy hampirisihan’ny demonia hataontsika. Eritrereto tsara àry ny amin’izany. Inona avy moa ireo zavatra ratsy nataon’ny demonia?... Nanao firaisana tamin’ny vehivavy izy ireo talohan’ny Safo-drano. Zavatra tsy tokony hataon’ny anjely anefa izany. Faly ny demonia rehefa tsy mankatò ny lalàn’Andriamanitra momba ny firaisana ny olona. Valio hoe ity fanontaniako ity: Iza ihany no tokony hanao firaisana?... Marina ny valin-teninao hoe ny mpivady ihany.
Misy ankizilahy sy ankizivavy manao firaisana, nefa tsy mety izany. Misy boky ao amin’ny Baiboly miresaka momba ny filahiana, na taova mampiavaka ny lehilahy. (Levitikosy 15:1-3) Fivaviana kosa no iantsoana ny taova mampiavaka ny vehivavy. Misy antony manokana namoronan’i Jehovah ireo taova ireo, ary ho an’ny mpivady ihany izany. Faly ny demonia rehefa manao zavatra tsy avelan’i Jehovah hatao ny olona. Faly izy ireo, ohatra, rehefa milalao ny filahian’ny ankizilahy iray ny ankizivavy iray, ary milalao ny fivavian’ilay ankizivavy koa ilay ankizilahy. Tsy tiantsika ny hampifaly ny demonia, sa ahoana?...
Misy zavatra hafa koa tian’ny demonia, nefa tena tsy tian’i Jehovah. Inona izany raha fantatrao?... Ny herisetra. (Salamo 11:5) Ny olona mahery setra dia olona ratsy fanahy ka mampijaly ny hafa. Tadidio fa izany no nataon’ireo olona ngezabe, zanaky ny demonia.
Tia mampitahotra olona koa ny demonia. Mody maka paozin’ny olona efa maty izy ireo indraindray. Manao ny feon’ireny maty ireny mihitsy aza izy ireo. Amin’izay dia maro no voafitaka ka mino fa mbola velona ihany ny maty ary afaka miresaka amin’ny velona. Lasa mino ny matoatoa àry ny ankamaroan’ny olona.
Tsy maintsy mitandrina isika mba tsy ho voafitak’i Satana sy ny demoniany. Hoy ny Baiboly: ‘Miezaka miseho ho anjely tsara i Satana, ary manao izany koa ny mpanompony.’ (2 Korintianina 11:14, 15) Tena ratsy anefa ireny demonia ireny. Andeha hojerentsika ny fomba mety hitarihany antsika hanahaka azy.
Ahoana no ianaran’ny olona zavatra betsaka momba ny herisetra, ny fanaovana firaisana maloto, ny fanahy ratsy ary ny matoatoa?... Misy sarimihetsika na zavatra hafa ao amin’ny tele sy radio ary boky ahitana betsaka an’izany. Mifandray tsara amin’i Jehovah ve isika rehefa manao ireny zavatra ireny, sa mifandray akaiky amin’ny Devoly sy ny demonia, araka ny hevitrao?...
Inona no mety hitranga rehefa mijery herisetra isika?
Iza no faly rehefa mihaino sy mijery zavatra ratsy isika?... Ie, i Satana sy ireo demoniany. Inona àry no tsy maintsy ataontsika?... Mamaky, mihaino, ary mijery zavatra mahasoa antsika sy manampy antsika hanompo an’i Jehovah. Milazà hoe sasantsasany amin’izany zavatra tsara izany!...
Inona no zavatra tsara tokony hataontsika?
Tsy tokony hatahotra ny demonia isika raha manao ny tsara. Matanjaka noho izy ireo i Jesosy ka atahorany. Hoy izy ireo indray andro, tamin’i Jesosy: ‘Tonga handringana anay ve ianao?’ (Marka 1:24) Ho faly tokoa isika rehefa ho tonga ny fotoana handringanan’i Jesosy an’i Satana sy ireo demonia, sa ahoana?...Mandra-pahatongan’izany anefa, dia hiaro antsika i Jesosy raha mifandray tsara aminy sy ny Rainy foana isika.
Andeha hovakintsika ao amin’ny 1 Petera 5:8, 9 sy Jakoba 4:7, 8 ny zavatra tsy maintsy ataontsika.
Hizara Hizara Mahery Noho ny Demonia i Jesosy
Aza Manaiky ho Voafitaky ny Anjely Ratsy Toetra!